Ogaden News Agency (ONA) – War Saxaafadeed uu Soo Saaray Isbihaysiga PAFD ee Oslo lagu dhisay
Aas Aaska Isbihaysiga Shacabka ee Xornimada & Dimuqradiyada ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano (PAFD).
Waxaa intii u dhaxaysay 22-23 October, 2015 shir uga socday magaalo madaxda wadanka Norway ee Oslo wufuud heer sare ah oo kasocotay 5-urur oo kala ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (ONLF), Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Shacabka Gambella (GPLM), Jabhada Xoraynta Oromiya (OLF), Dhaqdhaqaaqa Xoraynta Shacabka Benshagul (BPLM), Jabhada Wadaniga Xoraynta Sidama (SNLF).
U jeedada shirkan ay ururadan u yeesheen ayaa ahayd in lagu dhiso Isbahaysi cusub oo lagaga hortagayo siyaasada guracan ee Gumaysiga Itoobiya iyo cadaadiska baahsan ee shucuubta ay ururadan matalaan uu Gumaysigu kuhayo. Waxaana lagu dhisay Isbahaysi lamagac baxay Isbihaysiga Shacabka ee Xornimada & Dimuqraadiyada (PAFD).
Isbahaysiga PAFD ayaa u a buuri doona fursad ay shacabka Itoobiya oo idil uu ku samayn karo barnaamij siyaasadeed oo ku salaysan rabitaanka shacabka, iyadoo siyaasad maroorsigii halka dhinac ahaa lagaga hortagayo laguna baabi’inayo, taasoo u damaanad qaadaysa shacabkoo idil xaquuqda ay u leeyihiin aayo katashigooda.
Si looga hortago siyaasad xumida, cabudhinta iyo nidaamka cadaalad darrida ku salaysan ee Gumaysiga Itoobiya, wuxuu isbahaysiga PAFD ku talaabsan doonaa xidhiidh diblomaasi, u doodida xuquuqda aadamaha, saxaafada iyo abaabulo kale oo lagu badalayo taliska Itoobiya.
Isbahaysiga PAFD wuxuu yeelan doontaa Gudi Maamul oo ka kooban masuuliinta ururadan siyaasadeed iyo xubno kamid ah bulshada rayadka. Gudigan Maamulka wuxuu magacaabi doonaa Gudi Fulin, Gudoomiye iyo labo Gudoomiye Kuxigeen oo isbadbadala sanad waliba oo ka imanaya xubnaha Isbahaysiga dhexdiisa ah. Gudiga Fulintu waxay ahaan doonaan gudi joogta ah oo leh xafiisyo, nidaam, dhaqaale, warfaafin IWM.
Isbahaysiga PAFD wuxuu ugu baaqayaa shacabka Itoobiya iyo kuwa Ogadenya oo idil ineey isbahayga kamid noqdaan ooy taageeraan si loosoo dhameeyo dhibaatada iyo bahdilka uu maamulka maanta jira ee Itoobiya kuhayo dhamaan shacabka Itoobiya.
Isbahaysiga PAFD wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka iyo kuwa deegaankaba, ineey door muhiim ah ka qaataan taageerida isbahaysigan cusub intii suuragal ah.
Ugu dambayntii, Isbahaysiga PAFD wuxuu ugu baaqayaa xukuumada manta kajirta Itoobiya ineey dib uga laabato dhibaataynta, ixtiraamto xuquuqda banii’aadamka, hirgalinta sharciga, iyo fulinta xal siyaasadeed oo dimuqraadi iyo nabad galiyo ah si colaada loosoo afjaro.
Waxaa soo saaray war saxaafadeedkan Isbahaysiga PAFD.
Waxaa Isbahaysiga PAFD lagala soo xidhiidhi karaa:-